Teknoloji - BBC News Somali
Madaxweyne Trump oo la kulmay maareeyaha guud ee Twitter
Madaxaweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Aqalka Cad kula kulmay Jack Dorsey oo wax ka aasaasay barta ay bulshadu ku xiriirto ee Twitter, si ay uga wada hadlaan baraha bulshada.
Facebook-ga oo ka shaqeynaya sidii uu u joojin lahaa akoonada dadkii dhintay
IBM ayaa bayaan ay soo saartay isku difaacday
Facebook oo dacwad ku furtay shirkad 'xogta ka xadda' macaamiisheeda
Qaar badan oo ka mid ah macaamiisha ayaa isku daya inay ka jawaabaan su'aalaha laga weydiiyo barnaamijyada xogtooda lagu qaadan karo.
Shirkadda Google ayaa xuseysa 20 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay
Maanta waxay shirkaddu u dabaal dageysaa sannad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii dhidibbada loo taagay - laakiin dadka qaarkood waxay runtii ku jah wareersanyihiin maalinta saxda ah ee ay howlgalka billowday Google.
Nikon oo daah furaysa kaamirooyinka aan muraayadda lahayn ee Z7 iyo Z6
Shirkadda Nikon ayaa shaaca ka qaadday kaamirooyinkoodii ugu horreeyay ee fareemka buuxa ah, isla markaana aan lahayn muraayadda, kuwaasoo ay ugu tala gashay dadka xiiseeya sawir qaadista iyo kuwa xirfad ahaanta u adeegsadaba.
Google oo daba galaysa ciddii iska qarisa
Shirkadda google ayaa diiwaan galinaysa goobaha dadka isticmaala ay ku suganyihiin xitaa hadii ay ogolayn iyaga, warbixintaasi waxaa tabinaysa wakaaladda wararka ee AP.
Gabadha Steve Jobs ayaa buug ka qortay xiriirkii kala dhaxeeyay aabaheed
Gabadh uu dhalay Steve Jobs oo lagu magacaabo Lisa Brennan-Jobs ayaa buug ay qortay kaga hadashay xiriirkii adkaa ee ay la lahayd aabaheed oo ahaa ninkii aasaasay shirkada Apple.
Tababarka ayaa ka bilaabanaya qol kombiyuutar oo lagu baranayo labada koontarool ee loogu walaaca badan yahay - waa joogga iyo jihada. Ka dib wuxuu qofku u gudbayaa duullimaad uu dhulka xarig ugu xiran yahay. Waa tababar aad u adag.
Qoyskii ugu horeeyay oo loo dhisay guri loo naqshaddeeyay farsamada 3D
Qoyskan oo ku nool dalka Faransiiska ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo loo dhisay guri gabi ahaantiisa la daabacay
Dadka ree Uganda ayaa ka cabanaya canshuurta lagu soo rogay baraha bulshada.
Muxuu Facebook u dalbanayaa in aad la wadaagto sawirkaaga oo qaawan?
Raha iyo ariga oo laga mamnuucay diyaaradaha American Airlines
Duulimaadyada shirkadda American Airlines ayaa laga mamnuuci doonaa in la saaro raha, ariga iyo kashiitada laga billaabo kawda bisha Luulyo xataa haddii ay yihiin kuwo la soo daweeyay.